Home Wararka Muse Biixi oo la soo hordhigay heshiiska Dekedda Saylac ee Farmaajo...
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in Hoggaamiyaha Maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu RW Itoobiya soo hordhigay heshiiskii afarta dekedood ee uu Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u saxiixay Itoobiya.
Sida aay xogta sheegeyso waxaa heshiiska ku jira Dekedda Saylac oo uu Farmaajo u saxiixay in ciidanka Badda Itoobiya aay isticmaalaan waxaana heshiiska loo saxiixay uu Itoobiya siinayaa isticmaalka Dekedda Saylac muddo 40 sano ah.
Muuse Biixi ayaa laga codsaday dhaqan gelinta heshiiska, wuxuuna Muuse sheegay in uu dib ugu celinaya Baarlabaanka iyo Guurtida Somaliland si aay go’aan uga gaaraan. Arrintan ayaa ka careysiisay Abiye Axmed sida aay xogta sheegeyso.
Dekedaha kale ee loo saxiixay Itoobiya ayaa kala ah.
Dekedda Baraawe iyo
Previous article[Deg Deg] Dhimasho & dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay duleedka Beledweyne
Next articleGuddiga doorashooyinka Jubbaland oo Isbadal ku sameeyay Jadwalkii ay soo saareen
[Daawo] Prof. Samatar oo farriin culus u diray shacabka Muqdisho kahor...
Rooble oo ku fashilmay inuu iska fogeeyo dib-u-dhaca doorashada & Qaar...